I-Deutsche Bank-ukukhishwa kwesibhamu sokuqala kwezomnotho kuqala? : UMartin Vrijland
I-Deutsche Bank-ukukhishwa kwesibhamu sokuqala kwezomnotho kuqala?
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-10 Julayi 2019	• 6 Amazwana
Cishe wawutholile; ukuchithwa kwamacala amaningi kuDeutsche Bank (DB). Engakabonwanga, izinkulungwane zabasebenzi zithole incwadi yabo yokuzihoxisa ngoMsombuluko odlule futhi zakwazi ukwenza ngaphandle kwesihe masinyane ushiye isakhiwo. Amagagasi amakhulu kakhulu e-redundancy ahlasela eLondon naseWashington DC, kodwa izinkulungwane kwezinye izindawo emhlabeni nazo zalahleka. Ngokuphelele, i-18.000 ivunyelwe ukubeka umsebenzi wabo ngonyaka ozayo ukunciphisa okuphelele kuzokwenyuka kwabasebenzi be-74.000. Leyo yinsiza enkulu yebhola lebhola eligcwele futhi umphumela wenziwa omkhulu, ngoba eLondon yedwa Abasebenzi be-3000 kungenzeka ngokungazelelwe bangakwazi ukukhokha imali yabo yokuqashisa noma yokuqashisa ngoba ithuba lomsebenzi omusha aliyona ephakeme kakhulu.
Kuyaphawuleka ukuthi ibhange elinjalo liqala ngokuzumayo ukusika ngenkathi umnotho ungahambi kahle umnotho noma kunjalo. Njengokuthi kunamakhulu amabhiliyoni ebhange elinjalo, amashumi ambalwa ezimbalwa ezindleko zabasebenzi akuyona nje ukudonsa olwandle. Njengoba ngikhathazekile, singabona lapha izibonakaliso zenkinga ehlelwe isikhathi eside, okuzobekwa insizwa encane. Nakuba singasho ukuthi amadoda ayizinkulungwane ezimbalwa e-United Kingdom cishe abantu abayizigidi ezingu-65 azikho ithonya elikhulu, akufanele sithande umphumela we-snowball.
Umnotho waseBrithani usuvele ume. I-Guardian ibike ngo-3 ngoJulayi kulo nyaka. okulandelayo:
Ngokokuqala ngqa eminyakeni eyisikhombisa, umnotho wase-UK uhlangabezane nokuphambana phakathi nekota yokuqala (imibiko eningiliziwe yokucwaninga) ngoba usongo lwe-Brexit engekho-deal luthinta ibhizinisi.
Ukukhula emkhakheni wezinsizakalo eziphezulu wase-UK usuphelile ngoJuni. Lokhu kufakazela umbono obhekene nenyanga lapho imboni kanye nemboni yokwakha iqhubekela phambili.
Izibalo zibonisa ukuthi umnotho wase-UK unganwe yi-0,1% ezinyangeni ezintathu kuya kuJuni, kusho i-IHS Markit ne-Chartered Institute of Procurement and Supply (Cips), ehlanganisa ukuhlolwa kwenyanga.
I-alamu yempilo yomnotho iyakhala, manje ukuthi iBrithani kulindeleke ukuthi ihambe e-EU ngaphambi kwe-31 Okthoba. Uma le nqubo ingaphenduki masinyane kwikota yesithathu, leli zwe lizobe selisezingeni eliphansi ngaphambi kwe-Brexit.
Izibalo zase-US nazo ziyasabeka, njengoba sibona kuwebhusayithi alt-market.com (chofoza ukuze ufunde):
Izinkomba ezibalulekile ezifana nemakethe yezindlu zihlushwa ngokuvame ukuthengiswa ngu-7,8% nokuwa kwamanani ngo-8,1%.
Ukuthengiswa kwemoto kuhamba ngezinga eliphansi kakhulu eminyakeni emine, kanti inzalo emalimboleko yemoto iyanda.
Sibona amazinga omlando wezikweleti zabathengi kanye nezikweleti ezinkampani. Sibona ukuvalwa okukhulu kwesitolo (okungaphezu kokuvalwa kwe-7100 kuze kube manje kulo nyaka), ukuyeka ukukhubaza ekuthumeni nasezimpahla, indawo ephansi kunazo zonke emhlabeni jikelele wezokukhiqiza we-PMI, i-PMI ebuthakathaka kusukela embonini yokukhiqiza yase-US kusukela ku-2009 kanye nokungahambisani neshadi lesibambiso sikahulumeni, njll.
Ngalokhu sesifinyelele ekugcineni ukuthi ngikubikezele lapha kusayithi isikhathi eside kakhulu: inkinga ehleliwe, lapho icala lokulahlekelwa lizofakwa ezicathulweni zokuphikisana okulawulwayo: ukunyakaza okungezona okwenziwe ngokuzenzekelayo kobuzwe obubizwa ngokuthi ' isimo sengqondo sokuqala sezwe. Le nqubo ihlelwe ngamabomu isikhathi eside kakhulu, i-Trump ne-Brexit currents efika emandleni e-US nase-UK ngokulandelana, bese kuthi umnotho ushayeke, ukuze ubuzwe, ukuvikelwa kanye nokuphikiswa okulawulwayo kungabhekiswa ngokuqondile ) 'imibono yelungelelwano' futhi bonke abanye abantu kusukela manje bazokubuka leli qembu njengamalungu e-NSB eminyaka ye-40 / '45. Ngakho-ke umgwaqo uvulekele ngokuphelele ku-oda olusha kusukela ku-chaos okulindelekile (futhi ehlelwe isikhathi eside). Kuyinto umdlalo waseRoma wasendulo we-'Ododo ab Chao '(ukudala ukuphuma kwezingxabano) esizibonayo zivele ngaphambi kwamehlo ethu.
Uma ufuna ukwakha uhulumeni wezwe, kufanele uqaphele ukugxekwa emphakathini. Yini engcono kunokuthola lelo qembu elibalulekile ukuze lithole amandla futhi likhule ekusekeleni, libeke umsindo ozwakalayo ngokucacile ngangokunokwenzeka kwi-retina yendawo yonke, bese ibeka umhlaba enhlekeleleni yezomnotho futhi ngaleyo ndlela iphele ngokucacile ukuba kubalwe nalolo qembu elibucayi? Lona umdlalo wokuphikiswa okulawulwayo.
Sekuyisikhathi sokuba ubone ukuthi useTurumanshow ngokoqobo; ukuthi umhlaba ugijima ngokusho kwesibhalo esicacile nokuthi iqembu elincane phezulu liqhutshwa ukuthumela lesi script isiqondiso esithile. Iqiniso elihle lokuthi ngiye ngifunda nokubikezela le nqubo lapha kusayithi isikhathi eside kungase kube yisibonakaliso sokuthi akukho zindlovu ezishiwo lapha. Yonke intuthuko ongayilandela cishe nsuku zonke inikeza ubufakazi balokho. Umbuzo kuphela ukuthi kuthatha okuningi ukuvusa ngaphambi kokuba ubone konke.
Ungathola konke mayelana nalendlela yangempela yamanga kanye neskripthi lesi sihloko kanye nezihloko ezixhunyiwe. Thatha inkathazo futhi uyifunde kahle.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: zerohedge.com, theguardian.com, i-guardian.com
Ukubhujiswa okulawulwayo kwe-brand 'rechts', i-Trump, i-Brexit (nayo yonke into exhunywe kuyo) iqalile
I-Brexit kanye nezinxushunxushu ezihleliwe zaseYurophu
U-Nigel Farage uyasula, i-Brexit yayiyi-psyop yokuchithwa kwamandla nokunyakaza kwezezimali
Izinkinga ze-Brexit nezinhlaka zikahulumeni yiyona ndlela enhle yokuthola amandla amaningi e-EU
Ukuphela kwesikhathi se-Brexit okubonakalayo ngemva kokungamukeleki kweBrithani House of Commons
Amathegi: inkinga, DB, Ibhange leDeutsche, afakiwe, mass, ukuxoshwa, ukunciphisa
10 July 2019 ku-12: 24
Phakathi naleso sikhathi, nje ukuxosha i-13 billion ibe ubuchwepheshe obusha ... ngakho imali yayilapho
11 July 2019 ku-11: 09
Esihlokweni esingenhla ngikhuluma ngamashumi ezinkulungwane zezindleko zemholo. Kuyavunywa, uma uvutha abantu abangu-18k futhi ulinganisela ukuthi konke kubiza okungenani ithani elilodwa ngonyaka, yi-1.8 billion ngonyaka. Futhi uma ekugcineni ushisa abantu abaningi, kuzokwehla kahle. Noma kunjalo, ungazibuza ukuthi labo bantu benzani konke lokhu. Kubonakala sengathi zidabukisayo kangangokuthi ayikuthinti kabi imisebenzi yansuku zonke yebhange, kungenjalo umuntu kufanele alinde ukuze akwazi ukuguqula kancane kancane imisebenzi ibe yizinqubo ezizenzakalelayo, kodwa akekho ... umuntu angaqala kusukela ngosuku olulodwa kuya kwesinye futhi ngakho-ke ngokusobala akekho umphumela omubi noma yini. Ingabe labo bantu babelokhu bekhetha imphunga yabo ngaso sonke isikhathi?
10 July 2019 ku-13: 30
Ngokweqile, kodwa ngokushesha yonke into iyawa, yilapho 'ithuba' elikhulu lapho izigqila zizogcina zidlala ngokumelene nabafana besikripthi. Izigqila zisenesikhathi esihle futhi zilinde konke.
10 July 2019 ku-14: 03
Uma ufunde isihloko sami sangaphambilini mayelana nomuntu onesizotha, akufanele uphazamise lelo thuba
10 July 2019 ku-15: 04
Leli thuba liyi-0%.
10 July 2019 ku-16: 38
Sabikezela eminyakeni edlule ukuthi cishe kuzoqala nge-DB, uhlelo olulungisiwe olusuka kubahleli abaphakathi. Akukho lutho ngaphansi kwelanga, libukele kude kusukela indlu yamakhadi izoduma. Umnotho owakhelwe esikweletini (kufaka phakathi imali yokubolekwa kwempahla / imali / i-stranglehold) ihluleka ukuhluleka.
« Ingabe abantu abaningi abakuzungezile ngempela (imizimba engenampilo)?
I-'gogo 'yinkqubo ye-AI egcwalisa ukuzenzekelayo kwe-avatar-avatar bio-robot »
Ukuvakashelwa okuphelele: 11.634.261